Two Quick ~ Google + Twitter Search | My Burmese Blog
Two Quick ~ Google + Twitter Search	On June 23, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Web	TwoQuick ဆိုတာ Google နဲ့ Twitter Search ကို ပေါင်းထားတာပါ။ Result ကို column ၂ ခုခွဲပြီး ပြပေးပါတယ်။ Google Search ကတော့ Google မှာ ရှာတဲ့ အတိုင်းပဲပြပေးပြီး Twitter Search Result ကိုတော့ Real Time Result နဲ့ပြပေးပါတယ်။ Home page က ရှင်းနေအောင် လုပ်ထားပြီး Everywhere နဲ့ Nearby ဆိုပြီး check2ခုထည့်ထားပါတယ်။
အဲဒီ ၂ ခုလုံးက ကြိုက်တာ select လုပ်ထား Google result ကို သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ Everywhere select လုပ်ထားရင် Twitter result မှာ နောက်ဆုံး tweet (Real Time) result ပြပေးပြီး Nearby လုပ်ထား၇င်တော့ လက်ရှိရှာတဲ့ IP address နိုင်ငံကိုလိုက်ပြီး location based result ပြပေးမှာပါ။ ကျွန်တော်လဲ စမ်းပြီးရှာကြည့်လုိုက်ပါတယ် လောလောဆယ် နိုင်ငံခြား သတင်းဆိုဒ်တွေမှာ hot ဖြစ်နေတဲ့ Hawaii ကို တိုက်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ North Korea ဆိုပြီး ထည့်ရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
SE, twitter	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=4+9Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts